Budata Antivirus Remover maka Windows
Budata Antivirus Remover
Free Budata maka Windows (0.46 MB)
Budata Antivirus Remover,
O doro anya na mmemme antivirus na nchekwa anyị na -etinye na kọmpụta anyị nwere ike na -esere ibe ha okwu site noge ruo noge, esemokwu ndị a nwere ike dị mwute ikwu na -ebute nsogbu na Windows ma na -ebutekwa mfu data. Ya mere, ọ nwere ike ịdị mkpa iwepụ otu ma ọ bụ karịa nime ha iji gbochie ha imegide onwe ha. Agbanyeghị, esemokwu nwere ike gbochie mwepụ nke antiviruses ndị ọzọ ma si otú a ruo nkwụsị.
Mmemme Antivirus na -ewepu netiti mmemme nwere ike, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, gbanyụọ mmemme antivirus niile na kọmputa gị, si otú a kwụsị njedebe na nsogbu dị na sistemụ. A na -enye mmemme a nefu ma nwee interface dị mfe nke ị nwere ike ịghọta ngwa ngwa. Antivirus Remover, nke dịkwa irè na ngwa ngwa noge ọrụ ya, ga -enyere gị aka imeri nsogbu gị na mwepụ antivirus.
Ụfọdụ antiviruses nwere ike ịhapụ faịlụ dị iche iche ma ọ bụ ndenye ndekọ mgbe ewepụrụ ha na kọmputa site na iji ụzọ nkịtị. Ndenye na faịlụ ndị a nwere ike ime ka antiviruses arụnyere ma emechaa rụọ ọrụ na nsogbu. Agbanyeghị, mgbe mmemme antivirus wepụrụ antivirus, enweghị akara ga -adị, yabụ ị nwere ike mara na mmemme nchekwa ị rụnyere ma emechaa agaghị ebute nsogbu ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na -enwe nsogbu na mmemme nchekwa etinyere na kọmputa gị ma chọọ iwepu ya kpamkpam, ana m akwado nke ọma ka ị ghara ịnwale.
Antivirus Remover Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.46 MB
Mmepụta: Brock Eldridge